Karazana vokatra: P2.97
P2.97 Forwin Series Indoor Event Rental LED Screen Fampidirana sy endri-javatra: ho miavaka amin'ny famolavolana azy, P2.97 hetsika an-tsary fampisehoana an-tsary LED rindrina horonan-tsary
P3.91 Forwin Series Rental Event Rental LED Screen
1) Mba hahazoana antoka ny fahazavan'ny sary sy ny lahatsoratra, ampiasao ny hazavana mena, maitso ary manga mitovy amin'ny jiro (± 10%) ary ny halavan'ny onja (± 2.5nm) no voafantina.
2) Ny lakaoly ampiharinay mba hametahana ny velaran'ny Module dia ampidirina avy any Korea Sourth. Mampihena ny vokatry ny loko ambadika. Vokatry ny fandraisana tanteraka ny jiro famerenam-bolo LED, ny fampisehoana dia manafoana ny urmbra sy ny matoatoa mandritra ny fampielezana.
3) Mampihatra ny haitao sarotra amin'ny fanidiana plastika isika, ny maodely tsirairay amin'ny haavony marindrano latsaky ny 0.1mm. Noho izany, ny fampiratiana anay dia manana fitoviana miloko tsara, homogeneity, izay miavaka amin'ny sehatry ny fampisehoana LED.
4) Ny famolavolana module dia manamora ny fanangonana ary manome antoka ihany koa fa tsara tarehy ireo kabinetra.
5) Ny fahasahiranana amin'ny bika aman'endrika dia mihamalalaka ary mahatsapa ny fahaiza-mandanjalanja telo refy sy dot-to-dot.
6) Ny vidiny dia mifaninana amin'ireo vokatra mitovy eny an-tsena ary azo antoka ny kalitaony.
Tombony bebe kokoa:
1 Vatan'ny alimina maty maty, lanja maivana ho an'ny fitaterana mora sy fametrahana marina tsara.
2 Mifanaraka tanteraka amin'ny mpanara-maso misy ary tsy misy ny fikororohana / ny famelana haingana / ny olana mosaikika.
3 Fanohanana ny fametrahana ny fametrahana mihantona / fametrahana tany, ho an'ny seho an-tsehatra / fahitalavitra / studio, ary fampiharana hafa amin'ny hetsika.
Fivoriambe sy fandroahana fitaovana maimaimpoana 4.
Fitaovana 5 tontonana dia: alim-panariana aluminium, ny fandeferana dia azo fehezina ao anatin'ny 0.2mm
6 7.5 KG fotsiny, hazavana faran'izay mahery
Efijery LED HD fanofana an-trano
Tsena kilasy avo lenta
Fisarahana tsy misy dikany sy tsy misy fanina
Ny halaviran'ny fijerena akaiky sy ny zoro fijerena malalaka
Fivoriana mora sy haingana ary vaky
Ny P2.9mm ao anaty trano HD Rental LED Screen Video Wall dia mivondrona miaraka amina endrika vaovao sy karazan-tsarimihetsika 2.97mm pixel pitch takelaka hazavana LED ao anaty trano ary ankehitriny dia nanjary nalaza kokoa teo amin'ny tsena fanofana avo lenta.
Ny fampisehoana rindrina horonantsary LED P2.97mm anaty trano dia mampiasa sidelock 2 izay afaka manatsara ny famolavolana mazava, tery ary tsy misy fangarony, izy io koa dia karazana kabinetra LED fidirana eo alohan'izay midika hoe ireo modely tarihina, ny herinaratra ary ny karatra fandraisana dia mety ho. nalaina mora foana avy eo alohan'ny fampisehoana rindrambaiko LED P2.97 fanofana.
Ny fisehoan'ny LED HD P2.9mm ao anaty trano dia mety ho vahaolana amin'ny sary an-tsaina avo lenta kokoa mifanaraka amin'ny fotoana rehetra ao anaty. \_
Sehatra anatiny, studio TV, kaonseritra, valan-javaboary, Fampisehoana an-tsehatra, Fisehoana mivantana, klioba, fampisehoana, kaonseritra, fety, efitrano, varavarankely fivarotana na fampirantiana, fihaonambe, backdrops an-tsehatra Freestanding ary toerana hafa ho an'ny tanjona dokam-barotra sy fialamboly.
FORWIN Series Indraindray ny fanofana efijery LED LED Rental
Fomba fikojakojana Azo atolotra eo aloha sy aoriana
Kabary lanja 7.8KG / Sombiny
Famirapiratana (Nits / ㎡) 1100nits
Fiarovana IP IP43